Lapa maoderina, tanàna sy zaridaina maoderina avy amin'ny CITY FORM DESIGN
Lafin-javaboary, tanàna ary zaridaina
Lavarambo singa tsy ilaina ilaina izy ireo mari-trano kely tanàna. Raha jerena ny fomba fiasa momba ny fampitaovana dia ampiasaina amin'ny fipetrahana izy ireo, saingy raha raisina ho fanomanana ny habakabaka dia fanaka an-tanàn-dehibe izy ireo. Feno lakandrano ny kianja, kianja, zaridaina, arabe ary fijanonan'ny tanàna.
Amin'ny dikany mivelatra kokoa, ny dabilio dia singa manandanja indrindra amin'ny fananganana trano maritrano tsy ao amin'ny zaridaina sy zaridaina fotsiny. Azontsika atao koa ny mahita dabilio eny amin'ny kianja, manoloana ny dingana amphitheater, amin'ny fety an-tsekoly, any am-piangonana, any am-pasana ary amin'ny toerana maro hafa.
Ireo dabilio-tanàna dia oasis ho an'ny tongotra reraka amin'ny dia lava, ary fotoana hijanonana mandritra ny fotoana fohy, izay mety ho fotoana fandavana fifankatiavana. Kely ny fitenenana amin'ny laoniny, ny dobin-tanàna fotsiny no zava-dehibe faran'izay manan-danja sy zaridainan'ny zaridaina, raha tsy izany dia sarotra ny maminavina ny manodidina ny kianja filalaovana, ny faritra anatiny amin'ny zaridainan'ny tanàna, ny faritry ny dobo filomanosana na toerana hafa an-daharana hafa.
Mampiasa dabilio zaridaina izahay amin'ny alàlan'ny mipetraka eo amin'ny masoandro ao amin'ny zaridaina voninkazo, mankafy resaka miaraka amin'ny namana iray ao amin'ny zaridainam-panjakana, mamaky boky eo amoron'ny kamory na mijery ankizy faly mankafy ny atin'ny kianja filalaovana. Raha tsy ho an'ny dabilio zaridaina, mety ho mahantra sy tsy dia mahomby ny toerana misy ny tanàna.
Ireo dabilio park City
Betsaka ny karazan-dapan'ny tanàna. Ny karazan'izy ireo dia azo hanavaka noho ny alehany, ny fananganana, ny fitaovana ampiasaina amin'ny fananganana azy, ary koa ny fomba sy ny famolavolana azy.
Noho ny filaharana na ny tanjona dia haintsika ny manavaka dabilio eny an-dalambe, matetika antsoina hoe dobin-tanàna, dabika zaridaina ary dobona zaridaina.
Noho ny fananganana, izany hoe, ny firafitra dia mitanisa izany dapa tsy misy mihemotra na dabilio miaraka amin'ny backrest. Bangko mijoro amin'ny tongotra efatra na mihoatra, ary mifamatotra tsy tapaka amin'ny tany amin'ny sainy manontolo.
Noho ny karazana fanamboarana sy famaritana vita, ny valan-javaboary no zaraina ho roa dabilio vy, dapa vy - dabilio vita amin'ny vy vy, dapa vita amin'ny beton, daboka vita amin'ny singa vita amin'ny betonta vita daboka vato na dobika plastika.
Noho ny fomba sy ny famolavolana dia azontsika atao ny manavaka ireo karazana am-polony samihafa amin'ny lakana zaridaina. Ny fahatapahana tsotra indrindra dia misy dapa maoderina sy ny dobera nentim-paharazana, matetika modely amin'ny fomba tamin'ny vanim-potoana nomena na zatra amin'ny tranobe manodidina sy ireo singa hafa mari-trano kely tanàna.
Ireo dabilio zaridaina tsara indrindra
Inona no tokony hodinihina rehefa mifidy talantalana zaridaina? Betsaka ny fepetra. Etsy ambany dia asehontsika ny zava-dehibe indrindra amin'izy ireo.
Dobain-trano mora vidy? Price
Toy ny karazana fividianana na fampiasam-bola, ny vidin'ny vokatra dia iray amin'ireo fepetra arak'asa. Amin'izany toe-javatra izany, ny vidin'ny làlan'ny zaridaina dia miankina amin'ny akora eo amin'ny dabilio sy ny refy. Ireo dabilio zaridaina mora indrindra matetika no rafitry ny vy. Ny kely indrindra dia ho mora indrindra. Ny lehibe kokoa ny dabilio, ny bebe kokoa ny fitaovana ampiasaina hamokarana azy, noho izany dia miakatra koa ny vidiny.
Lapan'ny tanàna azo antoka
Ambonin'izany rehetra izany dia tsy maintsy arovana ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy ny dabilio. Ny firafitr'izy ireo dia tsy maintsy azo itokisana ary maharitra, mba tsy hihena ny fiarovana amin'ny fampiasana io fanaka an-dalambe io miaraka amin'ny fampiasana azy.
Na dia tsy misy fenitra poloney ofisialy izay mihatra mivantana amin'ny dabilio zaridaina, misy fepetra takiana tokony hampiharina rehefa mamolavola sy manangana dobera zaridaina. Ny standard PN-EN 1176 ho an'ny fitaovana amin'ny kianja filalaovana no tena ampiasaina.
Faharetan'ny zaridainan'ny zaridaina
Ny fanaka tavela any amin'ny habaka amam-bahoaka dia mihantona amin'ny valan-dratsy. Noho izany dia matetika ny rafitry ny zaridaina dia rafitra manohitra ny vanim-potoana. Izy dia fanitarana ny dabilio izay mihady amin'ny tany, izay manakana ny fantsona tsy hifindra, hangalatra na fomba hafa famotehana azy.
Taratasy fako amam-pako
Matetika singa singa tsy azo sarahina amin'ny dabilio zaridaina dia fanariam-pako. Azo ampidirina amin'ny dabilio no singa azy. Izy io dia mety ho singa mampiavaka ny maritrano kely, fa avy eo tokony ho voafantina tsara sy hita maso mifanaraka amin'ny fananganana bench.
Ny dabika zaridaina dia afaka misy latabatra koa, famelomana sy ny singa maro hafa. Izy ireo dia manome toerana ho enti-manala kitapo, kitapo na kitapo. Mamela anao handry am-pitiavana ny boky izy ireo, mametraka ny zavatra sasany na mihinana sakafo amin'ny fepetra mitovy amin'ny ao amin'ny trano fisakafoanana iray. Ao amin'ny zaridainam-panjakana, indraindray ny dabilio dia miaraka amin'ny latabatra izay toerana hilalao chess, checkers na lalao hafa. Ireo dapa dia afaka manana jiro mitambatra amin'ny endrika jiro. Mety ho ampahany ao amin'ny seranana, loharano, sary sokitra na fandriana voninkazo izy ireo. Androany fotsiny ihany ny sary an-tsaina mametra ny mpamorona!
Arenim-paritra vy vy
Ny vy vy sy vy dia vy vy. Heverina ho fitaovana fanamboarana lava indrindra izay ampiasaina amin'ny famokarana dabilio-tanàna. Ny famonosana vy dia afaka maka endrika sy endrika maro. Manana haingo sy fanta-doko tsy mahazatra tongotra izy ireo. Ny dapa vita tahaka izany dia hiasa saika hatraiza hatraiza, satria afaka mamolavola tsara ny endrik'izy ireo ianao. Ny dabilio vy vy dia fanaka an-tanàn-dehibe izay hiasa tsara amin'ny zaridainan'ny zaridaina, zaridaina ary kianja.
Ny dobin-tsolika vy fananganana, aorian'ny famolavolana ny firafitra, dia ario ny vovoka, noho izay tsara tarehy ilay rindranony dia malefaka ary tsy mihetsika ny vatany.
Ny tombony hafa dia ny lanjan'ny lakana vy vy. Mavesatra tokoa ny dabilio zaridaina toy izany ka mijanona ho mafy orina ihany izy ireo na dia tsy ilaina ny hampita azy ireo amin'ny tany aza. Ny zaza mitsambikina amin'ny lamosina dia tsy hanongotra mora foana ny rafitra matevina, ary na dia ny vazaha aza dia mety handà ny hanao asa ratsy.
Solika hazo hazo
Ireo dapa vita tamin'ny hazo dia tena mahavariana. Ity sakana fananganana voajanahary ity dia manome toetra sy fahamendrehana. Mampalahelo fa tahaka ny kitay ihany, dia mitaky fikojakojana izany. Mila hosorahina sy havaozina tsy tapaka izy ireo. Tandremo ny fiarovana amin'ny tsy toetran'ny toetr'andro.
Ireo dabilio zaridaina dia tsy tokony apetraka mivantana amin'ny tany, fasika na ahitra. Tsy tokony hifandray amin'ny tany maharitra na mando tsy tapaka izy ireo. Izy ireo dia mety tsara amin'ny toerana misy tafo sy ireo manana fo mafy sy mavo.
Ireo dabilio park vy
Lakandrano misy ankehitriny sy maoderina? Na mety hatao dabilio ho an'ny zaridaina manokana? Eny amin'ny terrace? Ireo dapa vita amin'ny vy dia tonga hamonjy. Ny metaly metaly maro dia ampiasaina amin'ny rindran-tsary, matetika mateza, mateza ary maivana. Ohatra iray amin'ity fitaovana fananganana ity dia aluminium.
Ny dapa metaly dia manana endrika moderina. Ny iray amin'ireo tombony dia ny lanjany ambany. Ny dapa toy izany dia mora kokoa ny mifindra amin'ny toerana iray. Afaka miasa tsara izy ireo ho fipetrahan'ny mpijery amin'ny fampisehoana an-tokotany ivelany na ampahany amin'ny zaridaina an-jaridaina izay hanova ny toerany matetika kokoa, sns. arakaraka ny vanim-potoana.
Lapa fantsakana mivaingana sy vato
Ny zaridaina na zaridaina tanàna dia tsy mila manana zana-birao, lamosina nentin-drazana ary tongotra. Mety ho vatolampy mivaingana, voaforona malalaka na voasokitra vato. Mavesatra ireo karazana dabilio ireo, tsy mitaky fikojakojana ary saika tsy azo lavina. Mety ho ampahany amin'ny tohatra, fantsakana na fandriana voninkazo izy ireo. Izy ireo dia mifangaro tsara amin'ny singa hafa amin'ny maritrano kely.
Ny vahaolana malaza dia ahitana ny fampifangaroana singa maromaro. Ny dabilio misy seza hazo sy seza ary seza dia afaka manana tongotra mivaingana. Miankina amin'ny fanantenan'ny mpampiasa vola sy ny fisainan'ny mpamorona izany rehetra izany.
4.9 / 5 ( 31 vato )
dabilio zaridainadapa vita amin'ny betondobika hazoLapan'ny tanànaLavnan'ny zaridainaLavarambodobin-javona mivainganazaridaina zaridaina tsy misy tohinadabika zaridaina vidinylisitry ny vidin-tsolikadabika zaridaina hazodabilio park vylakandrano misy tanànadabilio maoderinadobin-trano mpamokatradabilio park irondapa vyAripy vylakandrano misy tanànadabilio maoderinadaboka moradobin-trano mora vidy